Igumbi lokulala eli-3 elinombono omangalisayo wokutshona kwelanga
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguMila
Indlu yethu ikude kubuphithiphithi bobomi basedolophini. Ukuba uyonwabela indawo ezolileyo nepholileyo, le yindawo yakho, enombono wolwandle kunye nomgama omfutshane wokuhamba edolophini.
Ikhaya lethu licoceke kakhulu, libanzi kwaye likhuselekile. Usapho lwam luhlala kumgangatho ophambili wendlu. Kuphakathi ukusuka kwisixeko saseTacloban kunye nesixeko sase-Ormoc, kufutshane nesiqithi saseKalanggaman, ibhulorho yaseSan Juanico, iMcArthur Park. Nceda wazise umntu xa ufuna uncedo lokubhukisha isithuthi sabucala.
Ikofu kunye nesonka esitsha sendawo kunye neziqhamo ziya kubonelelwa rhoqo kusasa ukuze usuku lwakho luhambe. Ukuba ukhetha ukuba ukutya kwakho kuphekwe okanye kuhlanjwe impahla, iyafumaneka ngexabiso, vumela umntu azi kwangethuba.
Uluntu lwethu lukhuselekile, lukufutshane nedolophu kwaye rhoqo kusasa abalobi bazisa iintlanzi zabo zosuku elunxwemeni. Ukuba ufuna ukubabona besebenza, kufuneka uvuke ekuseni. Ngamanye amaxesha, bakhetha ukuzomisa intlanzi, ngoko uyibona kwindlu yethu.
Ukuba ufuna ulwazi malunga nento ekhoyo edolophini nakwindawo ekufutshane, yazisa umntu. Usapho lwam luneentloni kakhulu, kufuneka ubuze imibuzo ukuba iyimfuneko, abayi kukunika ulwazi ngokungalindelekanga.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Carigara